Eshibhile UKWAKHA izingxenye zethusi ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Insimbi engeyona eyensimbi yokwakha okwenziwe ngokwezifiso zethusi izingxenye zokwakha
Inqubo ebomvu yokushaya isibhakela inqubo ethuthukile yobuchwepheshe esanda kuthuthukiswa ngesisekelo sokunemba kwesimanje nokukhipha okushisayo. Ngokuthuthuka komphakathi kanye nokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, imboni yemishini ibeke phambili izidingo ezintsha zamandla omshini wezingxenye zemishini. Izinkambu zohlelo lokusebenza zifaka ukukhohlwa kwezindiza, izinjini zikadizili, ukukhohlwa, ukukhohlwa emikhakheni ehlukahlukene, ukukholelwa olwandle, ukukhohlwa kwezikhali, imishanguzo yamakhemikhali, ukukhohlwa kwezimayini, ukukhohlwa kwamandla enuzi.
Izinzuzo zokwakha izinsimbi zethusi ezingenazinsimbi
- Abalingisi banokunemba okuphezulu kakhulu nobukhulu besimo esiphansi
- I-plasticity enhle ekamelweni lokushisa kanye nokushisa okuphezulu
Brass ekwakheni ukucubungula isimiso
1. Chitha isakhiwo sokuphonsa indawo, wenze kube okusanhlamvu okuhle, bese ucindezela izikhala ezincane ezingenalutho (uqinise ukusondelana) ukwenza ngcono izinto zemishini nobudala.
2.Ukufaka okungenalutho kuzimo ezahlukahlukene zomkhiqizo ngezinsimbi ezilula.
I-OEM yethusi elenziwe ngensimbi engeyona eyensimbi yokwakha insimbi-China Shanghai ithusi engeyona eyensimbi yokwakha izingxenye zomkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. I-high-precision yethusi yokwakha ngekhwalithi ezinzile nethembekile ingacutshungulwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwethusi ekwakheni izingxenye zemishini. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo eyakhiwe ngethusi inikezwe ngokuhambisana nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana wezingxenye zethusi zokwakha izingxenye kumakhasimende ethu abalulekile.
Yikuphi ukusetshenziswa kwezingxenye zethusi ezihlanganisiwe
I-Brass ivame ukusetshenziselwa ukwenza ama-valve, amapayipi amanzi, amapayipi okuxhuma ama-air conditioner angaphakathi nangaphandle, nama-radiator.
Izinzuzo ze-Ouzhan Brass Forging Service
- Yonke imikhiqizo yokwakha yethusi enembile ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza izingxenye zethusi ezenziwe ngobuciko.
Langaphambilini CNC ukuvula ipulasitiki
Olandelayo: I-OEM yensimbi engenasici ejika izingxenye ngokwezifiso